Mmekorita: Mmekọ di na nwunye | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home mmekọrịta Abụọ Bonding Di na nwunye
Ọ bụ ezie na alụmdi na nwunye n'onwe ya nwere ike ịbụ ọha na eze e mere njikọ, ọchịchọ ịbụ di na nwunye bụ ihe ndu. Mmekọahụ na njikọkọ bụ ụgwọ ọrụ nkịtị. Ụmụ mmadụ so n'òtù ndị na-erughị 5% nke ụmụ anụmanụ na-akpọ ndị na-emekọ ihe ọnụ. Nke a pụtara na anyị nwere ụbụrụ ụbụrụ nke na-eme ka anyị nwee ike ịlụ maka ndụ, bụrụ ndị na-eme ka mmadụ bụrụ otu, dị ka swans. Ha na-enye anyị ohere ka anyị nwee mmekọrịta dị ogologo oge, ogologo oge maka ndị na-elekọta ụmụ abụọ ịzụlite ụmụ ha. Otú ọ dị 'ịbụ ndị otu na-eme ka mmadụ nwee mmekọahụ' adịghị otu ihe ahụ dị ka 'ịkwa iko'. Ọnwụnwa nke 'na-apụ n'ụlọ' dị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụ anụmanụ nile gụnyere ụmụ mmadụ. Ntụle dị mma nke akwụkwọ ndị ahụ dị Ebe a.
The usoro nkwụghachi ụgwọ bụ ebe ha na-ejikọta ibe ha. Ọ bụ otu ihe ndị ahụ na-eme ka anyị nweta ụgwọ ọrụ ndị ọzọ nke nri na mmiri. N'ụzọ dị mwute, ọ bụkwa ebe edozi ma ọ bụ ụgwọ ọrụ dịka mmanya, nicotine, na ọgwụ ọjọọ nwere mmetụta. Ha na-amanye usoro obi ụtọ / ụgwọ ọrụ. N'ezie, ụgwọ ọrụ dịka cocaine na mmanya nwere ike ịme ka enwe mmetụta siri ike karị karịa ịkwa iko. Ndị nchọpụta achọpụtawo na ndị na-ejikọta ibe ha, ma e jiri ya tụnyere ụmụ anụmanụ ndị na-akwa iko site na okike, na-enwe ike ịṅụ ọgwụ ọjọọ. Anyị ga-ahụ mgbe e mesịrị n'okpuru The Coolidge Effect n'okpuru ihe kpatara nke a ji bụrụ ezigbo nsogbu maka ịhụnanya na-akwado.
Nkwado na ntụkwasị obi dị mkpa. Anyị na-achọkarị igosi ịhụnanya site na ahụ anyị dịka site n'ịchikọta, ịchutu ọnụ, ịdọ aka ná ntị, ịkwa iko na inwe mmekọahụ. Mmasị ịhụnanya "na-eme ka anụ ọhịa ahụ dị njọ" ma na-agwọ ọrịa. Ndị di na nwunye nwere mmekọrịta ịhụnanya na-adị n'otu na-ahụ n'ezie agwọ ngwa ngwa mgbe o merụsịrị. Ma ànyị na-eche maka ịhụnanya n'ịhụ 'ịhụnanya,' ma ọ bụ dịka ọchịchọ na ọchịchọ anụ ahụ, mmetụta a na mmetụta uche dị na ụbụrụ na-ahụkarị. Ya mere site n'ịmụta ihe anyị ga-eme ka ụbụrụ na-arụ ọrụ ga-enyere anyị aka inweta mmetụta ahụ na-eme ka ndụ na-eme n'ụzọ dị iche iche karị.
<hụnanya Dị Ka Njikọ Ashụnanya Dị ka Ọchịchọ Mmekọahụ >>